INkonzo yabaThengi kunye neNkxaso yabaThengi
NgoMgqibelo, ngoJuni 5, 2010 NgoMgqibelo, Oktobha 17, 2015 Douglas Karr
Kukho ingxaki kwishishini elikwi-Intanethi. Sisebenzisa amagama enkonzo yabathengi kunye nenkxaso yabathengi ngokungafaniyo… kodwa zithetha izinto ezimbini ezahlukeneyo. Rhoqo, umbutho okwi-Intanethi otyale imali kwiqela lokuxhasa uphefumlela ukuhlawulela umbutho ongenzi njalo.
Ngokuhlwanje, bendibhala isindululo esisemgangathweni sokuhanjiswa abathengi bethu kwaye ndifuna ukuqiniseka ngokwahlulahlula inkonzo xa ithelekiswa nenkxaso. Njengombutho wenkonzo, uxanduva lwethu kukunxibelelana ngokufanelekileyo nomthengi kwaye sihambise oko bakucelileyo. Asinakho ukubonelela ngenkxaso, nangona. Asinabasebenzi ukuxhasa abathengi kwaye akukho mali yaneleyo kwizivumelwano zethu kubasebenzi beqela lenkxaso. Ngoku sinikezela iinkonzo kubaxhasi e-United Kingdom, Canada nase-United States… nantso into eninzi yokufumana abantu.
Ndikhumbula xa ndisebenza e NgqoThagethi ukuba abathengi bethu basitsalele umnxeba nge-Outlook enikezela nge-imeyile ngokuchanekileyo. Yaba yingxaki yethu kuphela kuba sasibhatala abathengi ababelindele inkxaso njengenxalenye yokuzibandakanya kwabo kwinkonzo yabathengi. Umxhasi akakwazanga ukubiza i-Outlook ayiyi kuyilungisa, nangayiphi na indlela). Yanyanzelisa i-ExactTarget ukukhuthaza ikhowudi engalunganga ye-HTML ukuze isebenze kwimicimbi… kwaye iqhubeke nokuxhasa imicimbi ebengenakulawula ngokwenyani!
Isoftware njengenkampani yeNkonzo yahlulwe-uninzi lwazo lubonelela ngenkxaso kwisiganeko ngasinye, ezinye zibonelela ngenkxaso yeephakeji, kwaye ezinye aziboneleli kwaphela. Ngamaxesha athile, iinkampani zityala imali kwiSoftware njengeNkonzo kuphela ukufumanisa ukuba akukho mntu uza kubiza xa iphuma. Esi sisikhundla sokubeka inkampani kuyo.
Ngoku sijamelene nayo khulula izicelo -Google Analytics, i-YouTube, i-WordPress, i-Twitter kunye ne-Facebook-kwaye zonke ngokukhawuleza zibaluleke kakhulu kumashishini ethu. Zonke ezi ziinkampani ezibonelela ngeenkonzo ezinkulu… kodwa zinqongophele naluphi na uhlobo lwenkxaso (iWindowsPress ineVIP, uGoogle uqinisekisile umntu wesithathu). Iinkqubo zethu ziyakhula ngokuxhomekeka kunye nobunzima njengoko siqhubeka nokudibanisa kunye nokudibanisa umxholo wethu. Kwenzeka ntoni xa konke kungahambi kakuhle?
I-IMHO, ngumcimbi wexesha ngaphambi kokuba ezi nkampani zinyanzeliswe ukuba zibonelele ngenkxaso. Iiapps zikaGoogle, umzekelo, zibonelela ngenkxaso kwi $ 50 ngomsebenzisi ngonyaka. Esi sisivumelwano esihle kwaye ndiqinisekile ukuba siyasiphepha nasiphi na isoyikiso esisemthethweni esinokubakho kuGoogle ukuba bashiye inkampani iphezulu kwaye yomile ngaphandle kwe-imeyile iveki okanye ezimbini.
Inkxaso yabathengi ibalulekile kwimisebenzi ebalulekileyo. Kungenxa yoko kukho iinkampani ezinje Indawo yeWebhu phezu google Analytics, NgqoThagethi phezu ILyris, yaye Squarespace phezu WordPress. Ngelishwa, akukho zikhetho zininzi kakhulu xa kuziwa kwi-YouTube, ku-Twitter naku-Facebook-umthamo wabo wokuhambisa yeyona nto ibenza bakwazi ukwenza ishishini kuyo.
Ndingumlandeli omkhulu wetekhnoloji yemithombo evulekileyo, kodwa ndingathanda ukubona le mibutho yandisa inkxaso yayo… nokuba oko bekuya kuthetha ukuba abathengi kuyakufuneka bayihlawule. Ucinga ntoni?
tags: Inkonzo eyenzelweuxhaso lwabathengi
Isicwangciso esiliQili soBudlelwane boLuntu noLuntu